Shina: TOhodranon’i Three Gorges , Fotoana Natao Hisainana · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 05 Jona 2011 17:12 GMT
Vakio amin'ny teny Italiano, русский, Français, English
Tao amin'ny fivorian'ny komity mpitantanana ny Filankevi-panjakana natao ny 18 May teo, dia nisy fanambaràna iray navoaka nilaza ny voka-dratsy goavana entin'ilay tetikasa Tohodrano Three Gorges.
Nandritra ny 17 taona nilaina nananganana azy ary mandra-pahatongan'ny fahavitany tamin'ny Oktobra2008, nidehaka i Shina fa io tetikasa io dia hiditra ao anatin'ny asa fananganana sy zava-mahatalanjona erantany. Tamin'ny faran'ny 2008 dia nahatafakatra ny haavon'ny rano ho any amin'ny 172.5m ambonin'ny haavon'ny ranomasina ilay tohodrano ary nilàna ny famindràna toerana olona 1.4 tapitrisa.
Araka ny tatira avy ao an-toerana, ny Filankevi-panjakana dia niaiky fisianà lafiratsy maromaro entin'ilay tetikasa, isan'izany ny fiveloman'ireo olona voatery nafindra toerana, ny ara-tontolo iainana ary ny firafitry ny tany, ny fiantraikany amin'ny fitaterana an-drenirano, ny fahasimbana noho ny haintany any amin'ireo faritany ambany toerana.
Ny tohodrano Three Gorges, Yichang. Sary nalaina tany amin'ilay mpampiasa Flickr: DigitalGlobe-Imagery eo ambany fiarovana CC license BY-NC-ND 2.0.
Ny tohodrano Three Gorges sy ny tahirin-drano
Tato ho aho, ireo faritany ambany toerana miohatra amin'ilay tohodrano ao amin'ny Reniranon'i Yangtze, toa an'i Hubei sy Jiangxi, dia niaritra haintany mafy izay niantraika tamin'ireo mponina efa ho iray tapitrisa mahery ary tany fambolena efa ho an'hetsiny hektara. Fanampin'izany, ny haavon'ny rano tao amin'ilay renirano isan'ny lehibe indrindra ao Poyang Lake, dia nidina be amin'ny farany ambany indrindra noho izay hita teo amin'ny tantarany. Ny Finless Porpoises (Marsouin amin'ny teny frantsay) miaina anaty ranomamy izay nisy tao amin'ny Reniranon'i Yangtze izao dia tandindonin'ny faharingànana. Betsaka ireo fanehoan-kevitra eo anivon'ny aterineto no nanomboka nahita fifandraisana amin'ilay tohodrano sy ny loza voajanahary toy ny horohorontany, ny fihotsahan'ny tany, ny tondradrano ary ny haintany izay hita tato anatin'ny taona maromaro lasa.
Ity ambany ity ny fantina fanamarihan'ny Sina Weibo [zh] avy amin'ny vaovao mitohy momba ny haintany ao amin'ny faritanin'i Hubei sy Jiangxi:
-Ity no fiasan'ny tetikasa tohodrano goavambe nataontsika ao Three Gorges: ho ringana ny ankabeazan'ireo karazan-trondro sarobidy. Ny ampahany amin'ilay renirano any amin'ny faritra ambonin'ilay tohodrano dia itsivalambalanan'ireo fatin-javatra maro manelingelina ny fitaterana an-dranomamy. Nanakana ny fikorianan'ny rano sy nitarika ny faharitan'ireo farihy tany aoriany ilay tohodrano Nanova ny toetr'andro ny fiovan'ny tontolo iainana…dia mbola ho inona koa no tsy maintsy ho hatrehintsika? Vao ny fanombohany [ny loza ho avy] fotsiny ve izao ?? Mandritra izany fotoana izany dia mirehareha isika amin'ny tanjaky ny olombelona, fa mba nanaja ny natiora ve isika? Aza setrasetraina ny fara sy dimbintsika noho ny fitiavana hanome fahafaham-po ny nofinofin'ny sasany hahita ny tonga lafatra fotsiny!
-faritany iray ahitàna farihy maherin'ny arivo no nanjary nijaly noho ny haintany. Very ny fanjàntsika ny voary, ny tany izay renintsika, mba hahazoana mihazakazaka manenjiaka Harin-Karena Faobe. Farany, ho verintsika ny zavatra rehetra. Rankizy, hoavy toy inona no navelanay ho anareo?
-Izany no antony maha-zava-dehibe ny demaokrasia. Rehefa nivadika ho raharaham-pirenena sy ny governemanta ao an-toerana ny amin'ilay tetikasa fanaovana tohodrano, ny tena manampahaizana sy ny olon-tsotra dia tsy nandray anjara tamin'ny fanapahan-kevitra isan-tokony; ho mandrakizay ny loza voajanahary ary tsy misy azo hialàna amin'izany.
-Tena manana olana goavana amin'ny tsy fahampian'ny rano fisotro tokoa i Shina ankehitriny. Amin'izao fotoana tena maha-henjana be ny haintany any atsimo izao, fomba ahoana no fomba hamiliantsika làlana ny rano ho any avaratra? Nanana olana tsy fahampian-drano i Beijing, tsy misy dikany izay halafon'ny tsenan'ny trano fonenana any. Rehefa tsy misy rano, mivady ho nofy ratsy ny andavanandrom-piainan'ny vahoaka.
Fanalàna azy amin'ilay tohodrano lehibe indrindra erantany
Mpanoratra sady bilaogera manana ny maha-izy azy, Han Han, no namaly mikasika ilay olana taminà fombany manàla azy— tamin'ny filazàna hoe ny tohodranon'i Three Gorges no goavana indrindra manerana izao tontolo izao:
Ireo ao anaty fanoherana niteny hoe: ny tohodranon'i Three Gorges dia hanohintohina ny firindram-piainana, na izany any alohany, na any aoriany. Ny tohankevitro, na dia talohaben'ny fahavitàn'ilay tetikasa aza, dia efa very ny fifandanjan'ny fiainana. Tena tsy takatry ry zareo mihitsy.
Ireo ao anaty fanoherana niteny hoe: ny tohodranon'i Three Gorges dia ho lasibatra rehefa misy fanafihana miaramila. Vao indray mandeha mahavoa ilay tohodrano fotsiny ny miaramila fahavalo, tonga dia ho tapaka ny herinaratra ary hiatrika loza mahatsiravina ireo monina any ambaniny. Heveriko ho efa voavaha ny olana: efa napetratsika any amin'ireo tanàna any ambany any daholo ireo orinasa goavambe toy ny FoxComm. Raha toa vaky ny tohodrano ka manafotra ny tanàna, tsy hitsetsitra ny Shinoa amin'ny asa karama varimasaka intsony izao tontolo izao. Ny tena zava-dehibe indrindra amin'ireo, tsy afaka ny hamokatra iPhones bobaka be intsony i Etazonia. Raha izay no jerena, tsy hamely mihitsy ny tohodranon'i Three Gorges ny miaramila mpanafika.
Ireo ao anaty fanoherana niteny hoe: Hiteraka horohorontany ny tohodranon'i Three Gorges. Sahoan-dresaka ranofotsiny izany ary tsy azo porofoina. Na atao aza hoe ny tohodranon'i Three Gorges no niteraka ny horohorontany tao Wenchuan, tamin'ny fankalazana ny fahatelo taonan'ny horohorontany nahazo an'i Wenchuan, ilay seho goavana amin'ny fahitalavitra dia nilaza azy iny ho zava-mahatalanjona vitan'i Shina. Tsy misy na inona na inona azontsika saintsainina momba an'izany. Nanaporofo ilay horohorontany fa nahazo fandresena goavana isika. Raha izay lalan-kevitra izay no arahantsika, azontsika atao ny mamintina hoe hitondra zava-mahatalanjona sy fandresena maro ho an'i Shina ny tohodranon'i Three Gorges. Iza indray eto ambonin'ny tany no afaka hifaninana amin'ny laza toy izany?
Ireo ao anaty fanoherana niteny hoe: hitondra mankany amin'ny haintany ny tohodranon'i Three Gorges. Tamin'ity taona ity, ny hadirin'ny rano ao amin'ny farihy Poyang, ny ranomamy lehibe indrindra ao Sina, dia nihena ho ny ampahafolon'ny hadiriny hatrizay tao anatin'ny herintaona sy tapany monja, ary be ny olona manahy mafy vokatr'io. Heverin-dry zareo fa ny governemanta ao Jiangxi dia hahazo aretin'andoha amin'io. Raha ny marina, vendrana ianao. Ny fidirambola kelin'ireo tompon-tany dia nifototra tamin'ny fivarotana velaran-tany. Velaran-drano tsy azo amidy. Ny governemanta ao Jiangxi dia tokony ho nahay nanarararotra an'izay fotoana izay hananganana tohodrano tany ampiandohan'ny rano ary hamela azy hikoriana. Avy eo ny governemanta ao Jiangxi mety hahita kely indray ampahan-tany aminà kilometatra tora-droa azony hamidy. Manana toerana iray azo amidy tsara aza ry zareo: ny vakoka ao Poyang, ny loharano iaingan'ny rano mamatsy io faritra midadasika be io, harena miafina h an'ny fianan-koavinao ao anaty fahafenoana. Azon-dry zareo atao koa ny manasa ilay rangahy nanome alalana ny tetikasa Three Gorges mba hametraka tsipika boribory manodidina ny vakok'i Poyang sy mamorona faritra ara-toekarena iray miavaka eo. Ho tantara fahatsiahy iray hafa izany mba hanosehana ny ara-toekarena ao amin'ny faritra afoavoan'i Shina ao.
Ny olona sasany mampiasa ny tohodranon'i Three Gorges hamelezana ny mpitarika antsika fotsiny, miampanga azy ireny ho niteny hoe, “tsy hahita izay tondra-drano any intsony aho rehefa maty.” Te-hiteny amin'ireny olona ratsy fo rehetra ireny aho hoe diso tanteraka ry zareo. Tena misaina momba ny tondradrano aorian'ny fahafatesany tokoa ireo mpitondra. Ary izay no antony nananganan-dry zareo ilay tohodrano. Aorian'ny fahafatesan-dry zareo, ny faritra ambony ihany no ho tondraka raha tsy ho tratr'izany kosa ny any amin'ny faritra ambanin'ilay tohodrano. Mbola manana patsabe hohanina ry zareo. Hatreto aloha, tsy mitombina izay filaza izay. [Fanamarihan'ny mpandika: ny dikan'ny hoe tondraka eto dia ny hoe mahazo vola. Ampifandraisina amin'ny hoe rano ny vola eo amin'ny fampiasa andavanandro…]
Olana ara-tontolo iainana nanjary fikononkononana fihokoana
Ireo mpanohana ny vondrom-piarahamonin'ny Shinoa avy amin'ny vohikala Maoist Utopia, na izany aza, dia mino fa ny fifanakalozan-dresaka momba ny tohodranon'i Three Gorges dia taingenan'ny elatra havanana fikononkononana hanaovana izay hampihen-danja ireo andiana mpitarika teo aloha:
Ndeha avelantsika any kely aloha ny resaka mikasika ny tsara sy ratsy amin'ny tohodranon'i Three Gorges. Na dia be lavitra aza ny tsy fetezany miohatra amin'izay nandrasana, ka mety hoe ho tonga hatramin'ny ho famotehana azy, tsy tokony havaditsika ho resaka politika mihitsy io ka hanenjehana ireo mpitarika tao amin'ny governemanta teo aloha notarihan'i Jiang Zemin. Ireo miseho milay sy mangirika fitondrana ary tsy mihevitra afa-tsy ny tenany ihany no mitady hampiasa ilay raharaha mba hanenjehana olona nahavita be ho an'ny tantara. Tsy hain'izy ireny ny maka lesona avy amin'ny tantara sy maneho fanajàna ho an'ireo nahavita be teo amin'ny tantara.
Mandalo vanim-potoanam-piovàna ny firenena shinoa amin'izao fotoana izao. Ao anatin'io dingana io, mirongatra tokoa ny ady seza eny anivon'ny antoko. Mandritra io vanim-potoana manan-tantara io, mila manokatra ny masontsika isika ary mijery fa ireo olon-doza amin'izao fotoana no toa olona tsy azo kitikitihana, tsy be resaka ary malaza erantany, raha ireo mahery fo kosa miaritra ny fanalàm-baraka. Ny tena mahery fo dia tsy miresaka mba hotehafana fotsiny sy hotoavina; ireo mpanao politika manana fandaharan'asa miafina ihany no mety hanorina ny lazany amin'ny fakàna ny fanohanan'ny olona sy amin'ny fifehezana ny fampitam-baovao.
Ohatra faran'izay tsara ny tohodranon'i Three Gorges raha resaka fiaraha-mientana sosialista. Ny hevitra dia avy amin'ireo mpitarika revolisionera teo aloha—Sun Yat-sen, Mao Zedong, Deng Xiaoping, Jiang Zemin—izay nanokana ny fiainan'izy ireo ho famelomana indray ny firenena Sinoa. Tsy azo ampitahaina mihitsy amin'ny sarinà tetikasa vokarin'ireo mpitàna birao mihitsy ny toy izany. Zava-bita amin'izao vaninandro izao mety hanova ny tantaran'i Shina io. Na izany aza, tokony isika hanameloka ireo fanehoana fanakianana izay manasongadina fotsiny ny lafiratsy amin'ilay tetikasa.
Tokony ho tonga saina isika fa hoe ireo mpitarika vitsy an'isa avy amin'ny liberaly, izay eo amin'ny fitondrana amin'izao fotoana nefa efa mahatsinjo koa fa mihozongozona ny sezany, dia miezaka mampiasa ny tetikasa tohodranon'i Three Gorges mba hitenenan-dratsy ny sosialisma sy ireo andianà mpitarika teo aloha. Tsy maintsy miray hina isika ary mampiseho masoandro ny fikononkononana ataon'izy ireo.